Amasevisi - Wuxi Fuzuan Machinery Technology Co., Ltd.
I-FUZUAN MACHINERY inikeza Usekelo Oluqhubekayo Nobungcweti Kumakhasimende Ethu
Ithimba lezobuchwepheshe le-FUZUAN lizokunikeza isevisi ezungezile nefika ngesikhathi ngaphambi kokuba wenze isinqumo sokugcina. Kuhlanganisa,
1. Siza ikhasimende ukuthi likhethe imishini yokucubungula ingilazi efaneleke kakhulu, imishini yolayini yezimoto eshisayo noma ene-laminated, ngokuya ngemakethe ehlosiwe kanye nezidingo zevolumu yokukhiqiza.
2. Siza ikhasimende ukuthi likhethe izinto zokwakha noma amathuluzi ahlobene nenkundla yengilazi yezimoto, njengempahla yengilazi eluhlaza, Izikhunta, amajigi, inkinobho yesibuko, indandatho yerabha/i-EPDM, uxhumano lwesihlalo se-wiper, i-talcum powder njll. yokukhiqiza ingilazi yezimoto.
3. Siza ikhasimende ukuthi lihlele yonke imishini yokucubungula ingilazi yezimoto endaweni yokusebenzela.
4.Hlela ukuvakasha kwezinye izinkampani ezilungisa ingilazi.
I-FUZUAN izokunikeza isevisi ephelele nehlelekile yangemuva kokuthengisa, engaletha isevisi yayo yobuchwepheshe ngokushesha ukuze kuncishiswe amathuba okungasebenzi kahle kwemishini futhi kufinyeze isikhathi sokuphumula. Kuhlanganisa,
1. Ukufakwa nokuqeqeshwa esizeni.
2. Imanuwali yesiNgisi kanye nevidiyo yokusetshenziswa nokugcinwa komshini.
3. Isikhathi sewaranti yonyaka ongu-1 (ngaphandle kokugqoka izingxenye), ukugcinwa kwempilo ende.
4. Ngesevisi ekude, amaphutha angenziwa ngokushesha futhi izenzo ezihlosiwe zingaqalwa.
5. Amahora angu-24 ukwesekwa kobuchwepheshe nge-imeyili noma nge-Skype noma ku-Whats App.
6. I-FUZUAN ihlinzeka Amakhasimende ethu ngohlu lwezingxenye ezisele ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kahle okuhle kwezinto ezinikezwayo. Isiphakamiso sethu ukuthi uthenge izingxenye eziyisipele ezisohlwini futhi uzigcine zikhona esitokweni ukuze uthole izidingo zesikhathi esizayo. singakunikeza nensizakalo yezingxenye ezisele ezinokwethenjelwa, sinikeze Amakhasimende izingxenye ezisele ngesicelo esithile, ukulethwa okusheshayo nangesikhathi kuyizinto eziza kuqala kithi.
Ngemva kokuthi okokusebenza sekufakiwe futhi kwalungiswa, okokusebenza kanye nezinsiza ezibangelwa izici ezingezona ezomuntu zizoshintshwa futhi zilungiswe mahhala.
Ngemva kwesikhathi sewaranti
Ukulungiswa nokugcinwa kwemishini yenkampani konke kwenziwa izinsizakalo zobuchwepheshe ngentengo evumayo, okungukuthi, izindleko zezinto ezibonakalayo + ukukhokhwa kwezindleko zokuhamba zabasebenzi.
Inani elithile lezingxenye ezisengozini futhi ezisebenzisekayo zinikezwa lapho okokusebenza kuphuma efekthri.